•Sicela ukufuniswa ubaba kaMxolisi Sokhela owamzalwa ngo 2003/05/19. Igama likamama uSokhela uFunagithini ongasekho nowayengokuzalwa KwaNyavu eMbungwini. .Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-M.N Nene enombolweni eth : 031 785 1193 nezikhathi zomsebenzi .
•Sicela ukufuniswa ubaba kaSithole Minenhle Gciniswa owazalwa ngo 2002/04/12. Igama likamama uSithole Sibongile ongasekho emhlabeni owayehlala KwaNyavu eMbungwini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-M.N Nene enombolweni eth : 031 785 1193 nezikhathi zomsebenzi .
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMkhize Luyanda Brian owazalwa ngo-200/03/11 kanye noMkhize Yamond Ndumiso Smangaliso owazalwa ngo-2003/07/12.Igama likamama uMkhize Cythia Senzekile ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-M.N Nene enombolweni eth : 031 785 1193 nezikhathi zomsebenzi .
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNompumelelo Zama Magoso owazalwa ngo-2003/02/10. Igama likamama uMagoso Princess Nana ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-M.N Nene enombolweni eth : 031 785 1193 nezikhathi zomsebenzi .
•Sicela ukufuniswa ubaba kaKhumalo Siyanda ozalwa ngo-2002/05/22. Igama likamama uKhumalo Thabisile ongasekho emhlabeni owayehlala eMaqongqo eCabazini.
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNks N. Nhlanzi enombolweni ethi : 031 785 1193.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaManelisi Thabethe owazalwa ngo-2002/11/06. Igama likamama uThabethe Makhosazane ongaseko owayehlala eManderstone. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-Nkk P.S Mthiyane enombolweni ethi : 031 785 1193.
WATCH: Truck driver dies after crashing into home in KZN
Daily Lotto: Three winners on Thursday 0 minutes ago Click here for the full list of lottery results